Soomaalida NFD oo ka cabanaya Tacadiyaadka Ciidamada Kenya.(Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Soomaalida NFD oo ka cabanaya Tacadiyaadka Ciidamada Kenya.(Warbixin)
Last updated Nov 5, 2019 1,516 0
Inkastoo si guud, ay dhibaatooyin la kulmayaan Soomaalida ku dhaqan dhulka NFD ee ay Kenyaatigu xooga ku heystaan, hadana waxaa jira dhibaatooyin horleh oo ay la noolyihiin dadka degan xuduud beenaadka.
Wargeyska Washington Post ee kasoo baxa wadanka Maraykanka ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo dhibaatooyinka ay Soomaalida NFD kala kulmayaan ciidamada Kenya, waxaana wariyaal katirsan wargeysku ay booqdeen deegaanno dhaca xuduud beenaadka.
Katuula waa deegaan ay Soomaalidu leeyihiin oo soo xiga dhanka xuduud beenaadka, waxaa nawaaxigiisa ka dhaca weeraro ay ciiidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadaan askarta Kenyaatiga ee isaga kala gudbaya NFD.
Dadka deegankaas waxay sheegayaan in mar weliba ay la kulmaan weeraro aargoosi ah oo uga yimaada dhinaca askarta Kenyaatiga, kuwaas oo marka la xanuunjiyo caradooda kala dul dhaca dadka maatida ah ee aan waxba galabsan.
Sida ay sheegayaan dad la hadlay wargeyska, waxay ciidamada Kenyaatigu si gaar ah u beegsadaan dadka Soomaaliyeed, taasi oo muujineysa in isirka Soomaalida ay isku mid yihiin askarta Kenyaatiga.
Waxay sheegayan dadku iney habeenkii ku seexdaan cabsi iyo wal wal, mar welibana y ka baqdin qabaan iney la kulmaan weeraro uga yimaada ciidamada Kenyaatiga, waxayna taas bedelkeeda sheegyaaan inaaney wax dhibaato kala kulmin ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala deegaannadaas.
Macallin dugsi Qur’aan oo kamid ahaa dadka ku nool deegaanka Katuula, laguna magacaabo Cabdil-Qaadir Cilmi ayay Warbixintu sheegeysaa in ciidamada Kenyaatigu ay habeen madow kala baxeen gurigiisa, kadibna ay toogteen.
Maxa’ed Cilmi oo adeer u ah macallinka ay ciidamada Kenyaatigu dileen ayaa sheegaya in askarta Kenyaatigu ku kacaan falka ay doonaan, islamarkaana aaney jirin cid is hortaagi karta.
Hooyada dhashey macallinka dugisga Qur’aan,laguna magacaabo Xaliimo Maxamed ayaa sheegeysa inaaney illaa iyo hadda garaneynin sababta rasmiga ah ee keentay in wiilkeeda ay dilaan ciidamada Kenyaatiga.
“ Weligiisa kama tagin deegaanka, wuxuu ahaa qof wanaagsan, wuxuu ka tagay saddex Xaas iyo caruurtii ay dhaleen” ayay tiri hooyo Xaliimo Max’ed oo ay warbixintu sheegeyso iney aad u murugsaneyd.
Sida ay Warbixintu sheegeyso, ahna xaqiiqda jirta, dowladda Maraykanka waxay taageertaa ciidamada Kenya, waxaana kahor iyo kadib duulaankii ciidamada Kenya kusoo galeen Soomaaliya uu Maraykanku Kenya la garab taagnaa taageero dhan weliba leh.
Hay’adaha sheegta iney u doodaan xuquuqda Aadanaha ayaa ka marqati kacaya in ciidamada Kenyaatigu ay ku kacayaan tacadiyaad ka dhan ah banii Aadamnimada, kuwaas oo si guud u beegsanaya Muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida.
Qof ay soo xiganeyso Warbixinta lagu daabacay Washington Post ayaa sheegaya iney jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku biiray Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, kadib markii ay soo bateen tacadiyaadka ciidamada Kenyaatigu u geysanayaan Shacabka Soomaalida.
“Al-Shabaab waxay weerartaa askarta kenyaatiga, Kenyaatiguna waxay weeraraan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan, waxaa jira dad badan oo hadda ku biiray Al-Shabaab, si ay uga aargutaan ciidamada Kenyaatiga” ayuu yiri Cumar Maxa’ed Ibraahim oo la hadlay wargeyska.
Ma ahan wax soo billowday sanadahan tacadiyaadka iyo dhibaatada ay ciidamada Kenyaatigu ku hayaan Soomaalida kunool dhulka la gumeysto NFD. Waxay Taariikhdu diiwaan gelisay xasuuqyadii Gaarisa Gubaay iyo Wagaala oo dhacay sideetameeyadii, kuwaas oo lagu dilay kumanaan ruux oo Soomaali ah.
Kenya, waxay hadda ciidamo ka joogaan wadanka Soomaaliya, kuwaas oo iyagana dhibaatooyin ku haya dadka Soomaalida, balse waxgarad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan in hadda ay jiraan awood Islaami ah oo u taagan u gargaarida iyo u aargudida Shacabka Soomaaliyeed ee ay Shisheeyuhu isugu soo habar wacdeen, awoodaas oo ah Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.